Kahor intaadan u bixin Fasaxaaga Fasaxa: Dukaan ka Cun Cunista Madaarka Frankfurt!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Kahor intaadan u bixin Fasaxaaga Fasaxa: Dukaan ka Cun Cunista Madaarka Frankfurt!
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • Wararka Fashion • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dukaamo iyo maqaayado badan ayaa dib looga furay Madaarka Frankfurt - Tim Mälzer's “Pezzo di Pane” wuxuu ku siinayaa dhadhan dhab ah oo Talyaani ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh FRA, laga bilaabo hormuudka Jarmalka iyo kuwa caalamiga ah ilaa dukaammada iyo makhaayadaha milkiilayaasha caanka ku ah ee maxalliga ah.
Noocyada ay ka mid yihiin Boss, Falke, Llyod, iyo Gant waxay ku xardhan yihiin qiimo dhimis xagaaga iyo aragtiyaha aruurinta jiilaalka cusub.
Waxa kale oo aad ka heli doontaa xulasho ballaadhan oo ah alaabada quruxda badan dukaanka cusub ee Duty Free oo uu ka furay Madaarka Frankfurt Retail GmbH & Co. KG aagga aan ahayn Schengen ee gaadiidka B Pier ee Terminal 1.
Ku soo dhawow mar kale Madaarka Frankfurt! Waxaa sii kordhaya dadka u ooman inay mar kale safraan, waxaana mugga rakaabka ee gegida dayuuradaha uu sii ballaadhayaa taas awgeed. Dukaamo iyo makhaayado badan ayaa sidoo kale dib loo furayaa si loogu adeego, waxayna diyaar u yihiin inay ku soo dhaweeyaan Terminals 1 iyo 2 isla waqtiga loogu talagalay bilowga fasaxyada dugsiga xagaaga ee gobolka Hesse ee Jarmalka bisha Luulyo 16keeda.
“Ugu dambayntii waxaan awoodnaa inaan mar kale u fidinno rakaabkeenna fursado kala duwan oo wax -iibsi iyo cunno,” ayay tiri Anke Giesen, oo ka tirsan guddiga fulinta Fraport AG oo mas'uul ka ah tafaariiqda iyo hantida ma guurtada ah. “Wadajir ahaan waxaan si tartiib tartiib ah ugu soo laabaneynaa sidii caadiga ahayd ka dib fiditaankii qallalan ee masiibada. Waxaanna leenahay sabab kasta oo aan hore ugu fiirinno rajo wanaagsan. ”
Waxaa jira waxyaabo badan oo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh FRA, laga bilaabo hormuudka Jarmalka iyo kuwa caalamiga ah ilaa dukaammada iyo makhaayadaha milkiilayaasha caanka ku ah ee maxalliga ah. Terminalka 1, rakaabka iyo booqdayaashu waxay booqan karaan suuqyada “Shopping Boulevard” iyo “Shopping Avenue”. Noocyada ay ka mid yihiin Boss, Falke, Llyod, iyo Gant waxay ku xardhan yihiin qiimo dhimis xagaaga iyo aragtiyaha aruurinta jiilaalka cusub. Waxa kale oo aad madax u noqon kartaa mid ka mid ah toddobadii Toddobaad ee Qiimaha Safarka iyo Dukaammada Lacag La'aanta ah si aad u hesho cadar aad u fiican ama hadiyado loogu talagalay dadka aad jeceshahay guriga, ama mid kasta oo ka mid ah alaabooyin kale oo soo jiidasho leh.
Ka waran macchiato latte dhadhan leh ka hor intaadan fuulin? Kooxaha ilaa 80 kafateeriyada iyo maqaayadaha ah ayaa aad ugu faraxsan inay mar kale u adeegaan martida. Haddii aad rabto inaad makhaayad ku dhex cashayso, waxaad u baahan tahay inaad soo bandhigto caddayn ah inaad si buuxda u tallaashay ama aad bogsatay ama aad dhawaan tijaabisay diidmo. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan cuntooyinka iyo cabitaannada ayaa sidoo kale lagu amri karaa inay qaataan. Goobta Cuntada ee heerka sare ee Terminal 2 waxay siisaa martida aragti yaab leh oo ku saabsan ficilka ka socda gegida dayuuradaha iyo gegida diyaaradaha.